SARAN-DALANA 500 ARIARY :: Misy manararaotra ireo mpanampy ny mpamily • AoRaha
SARAN-DALANA 500 ARIARY Misy manararaotra ireo mpanampy ny mpamily
Velon-taraina ny mpanjifa. Taorian’ny fampiakaran’ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra ny saran-dalana ho 500 ariary dia araraotin’ny mpanampin’ ny mpamily ny mpandeha. Betsaka amin’izy ireo no tsy manao tapa-dalana intsony na dia fiantsonana iray aza fa dia saran-dalana feno 500 ariary ihany no alainy amin’ny mpandeha.
Voakasik’izany manokana ireo taksibe mivondrona ao amin’ny kaoperativa Tselatra, izay ahitana ny zotra 147, 147D, 146, 178. “Efa tena fana- raraotana mihitsy ny ataon’ireo resevera vao niakatra ity saran-dalana ity ny 15 desambra lasa teo. Efa 500 ariary ny saran-dalana dia mbola tsy misy tapa-dalana ihany. Miala eo Besarety mankeny Ankadifotsy dia saran-dalana feno ihany no alainy”, raha ny fitarainan’i Hary, renim-pianakaviana monina eny Besarety.
Misy amin’ireo mpandeha kosa no efa fetsy fa avy hatrany dia atao madinika ny saran-dalana mba tsy hisian’ny olana. “Mahavatra manakalo vola mihitsy aho atao saran-dalana alohan’ ny hiakarana anaty taksibe. Raha vola vaventy na tonga dia 500 ariary no omena azy dia tsy hamerenany intsony”, hoy indray i Fara.
Marihina fa tamin’ny saran-dalana mbola 400 ariary no tsy nanao tapa-dalana ity kaoperativa ity mba hanazarana ireo mpandeha handoa izany rehefa hiakatra ho 500 ariary ny saran-dalana. Efa nanambara ihany koa ny filohan’ity kaoperativa ity fa tsy midika tsy hisy intsony ny tapa-dalana. “Ny fiakaran’ny vidin’entana rehetra, izay ampiasainay mpandraharahan’ny fitaterana no anton’ny fampakarana saran-dalana. Eo koa ny fiakaran’ny vidin’ny solika izay tsy mitsaha-mitombo. Manao tapa-dalana ihany izahay fa tsy misy intsony fotsiny ny tapa-dalana latsaky ny 400 ariary ho an’ny kaoperativa Tselatra”, hoy Rakotonirina Jean Louis Emile, filohan’ny kaoperativa Tselatra. Tsy ny avy ao amin’ity koperativa ity ihany no manao io fanararaotana io, fa misy maromaro mihitsy ary matetika miady aman’ olona ireo resevera ireo.
Pilo kely • Sosialy
Rano fisotro madio
Fanamboaran-dalana Efa misokatra ho an’ny fifamoivoizana ny arabe Ankazomanga-Andraharo